महिना दिनमै सवा ६ अर्ब बैंकहरुले कमाए नाफा, कुन बैंकको नाफा कति ? » aarthikplus
महिना दिनमै सवा ६ अर्ब बैंकहरुले कमाए नाफा, कुन बैंकको नाफा कति ?
वि.सं.२०७८ भदौ २५ शुक्रवार १७:३५
साउन महिनामा बाणिज्य बैंकहरुले ६ अर्ब ३१ करोड ११ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका छन्। नेपाल बैंकबाहेक बाँकी २६ वटा बाणिज्य बैंकहरुले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार, सर्वाधिक नाफा नबिल बैंकले गरेको छ भने सबैभन्दा कम राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले गरेको छ।
नबिल बैंकले ६१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले ७ करोड २२ लाख रुपैयाँ मात्र नाफा गरेको छ। १० करोडभन्दा कम नाफा गर्नेमा बैंक अफ काठमाण्डू र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक पनि छन्।
गत आर्थिक बर्ष बैंकहरुले ६३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ नाफा गरेका थिए। यसमा नेपाल बैंकको पनि हिसाब छ। २६ वटा बैंकको एक महिनाको नाफाका आधारमा आगामी बर्षको ९१२ महिनाकै० अनुमान लगाउँदा ७५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ ९नेपाल बैंकको जोड्दा अझै धेरै० नाघ्ने देखिन्छ।
ग्लोबल आइएमइ 484,681.62
एनआइसी एसिया 410,385.01
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड 150,872.26
नेपाल बंगलादेश बैंक 143,864.98
बैंक अफ काठमाण्डू 93,770.46
कृषि विकास 261,730.05
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक 72,227.97
एक महिनामा नबिलपछि ग्लोबल आइएमइ बैंकले ४८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ। यसपछि एनआइसी एसियाले ४१ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ।
मुक्तिनाथको नाफा धेरै विकास बैंकहरुले ६४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांक हेर्दा यसमा साहारा, साल्पा, कर्पोरेट र नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको तथ्यांक जोडिएको छैन।
सबैभन्दा बढी नाफा मुक्तिनाथ विकास बैंकले गरेको छ। बैंकले १४ करवड १५ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ। यसपछि ज्योति विकास बैंकले ९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ गरेको छ। सबैभन्दा कम सिन्धु विकास बैंकले २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ गरेको छ। फाइनान्स कम्पनीहरुले १६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका छन्।
महालक्ष्मी विकास बैंक 69,507.52
कामना सेवा 65,849.02
News Views: 446
तेह्रथुम पावरको आइपीओ तपाईलाई कति कित्ता पर्यो ? यहाँ बाट यसरी हेर्नुहोस् फ्याट्टै थाहा हुन्छ
२ खर्ब विदेशी लगानी ५२ देशबाट नेपाल भित्रियो, कुन देशबाट कति आयो ?